Weeraryahan Robin van Persie oo ku biiray kooxda Man Utd (Daawo Wareeysi Muuqaal ahaan muxuu yiri) - iftineducation.com
iftineducation.com – Xiddiga Qaranka Holland iyo kooxda the Gunners Fc Arsenal Robin van Persie ayaa si toos ah ugu biiray naadiga the Red Devils Man Utd .Laacibkaan oo maalmihii ugu dambeeyay loo badinayay inuu ku biiri doono mid kood kooxaha Man Utd , Man City iyo Juventus ayaa ugu dambeeyntii waxa uu xirtay Maaliyada kooxda Shayaadiinta cas cas ee ManU.
Weeraryahan Robin Van Persie waxaa laga soo baxshay Aduun gaaraya 30,4 Milyan oo Euro una dhiganta 24 Milyan oo Lacagta Pfund-ka dalka ingiriiska ah wuxuuna Saxiixay Qandaraas ku kacaya ilaa sanadka 2016-ka.
Ciyaaryahan Robin Van Persie waa 29 jir waana Kaptankii 5-aad ee iskaga taga kooxda the Gunners Fc Arsenal tan iyo sanadkii 2004 waxaana ka xusi karnaa Ciyaartooydii Fc Arsenal ka tagtay iyaga oo Xambaarsan Caalamada Kaptanimada Patrick Vieira, Thierry Henry, William Gallas iyo Cesc Fabregas .
Weeraryahan Robin Van Persie wuxuu heeystaa xili ciyaareedkii tagay abaalmarinta Xiddigii ugu wanaagsanaa horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League iyo Gooldhalinta Premier League oo uu ku qaaday 30 Gool.
Macalinka Man Utd Mr.Sir Alex Ferguson wuxuu ku amaanay Weeraryahan Robin Van Persie Xiddig aad u farsamo badan weliba mar kasta Goolal ka dhalin jiray kooxda Manchester Utd.Van Persie waa Xiddigii 3-aad ee xili Ciyaareedkaan cusub ku soo biira kooxda Man Utd waxaana uga soo horeeyay naadigaan laacibiinta kala ah Shinji Kagawa oo ka yimid dhanka kooxda Borussia Dortmund iyo Xiddiga Qadka dhexe Nick Powell oo laga soo iibiyay naadiga Crewe Alexandra.
Halkaan ka Daawo Van Persie oo Wareeysi dhiibay isaga oo Man Utd jooga
Weeraryahan Robin Van Persie ayaa lagu wadaa inuu ka bar bar ciyaaro Weeraryahano caan ah sida Rooney wuxuuna kulankiisa ugu horeeya u safan doonaa kooxda Man Utd kulanka maalinta Isniinta ah ay la yeelanayaan naadiga FC Everton.
Booskii uu soo baneeyay Weeraryahan Robin Van Persie ee dhanka Arsenal waxaa lagu wadaa inay qab qableyaal ka noqdaan Laacibiinta kala ah Olivier Giroud oo u safta Qaranka Faransiiska iyo Lukas Podolski oo u Ciyaara xulka Qaranka Germany.